Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 17)
Sida loo cusbooneysiiyo Oneplus X gacanta iyo adigoon lumin damaanadda rasmiga ah
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo cusbooneysiiyo Oneplus X gacanta isla markaana aan luminin damaanadda rasmiga ah ee boosteejada.
10 khiyaanooyinka WhatsApp ee aan ka baranay 2015
Fariimaha degdega ah waxay joogeen 2015. Maanta waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno tabaha WhatsApp ee aad ugu jeceshahay sanadkan.
Google wuxuu beddeli doonaa Java APIs-ka Android N iyadoo lagu beddelayo ilo furan
Open APIs ayaa beddeli doona kuwa Java laga bilaabo Android N, nooca cusub ee weyn ee OS ee aaladaha moobaylka
Mustaqbalka Android wuxuu ku jiraa boosteejada Shiinaha
Kuwani waa milicsiga iyo fikradaha aniga iga dhigaya inaan u maleynayo in mustaqbalka Android uu ku yaal boosteejada Shiinaha
Sida ugu dhakhsaha badan ee looga helo istaatiistikada batteriga ee ku saabsan qalabka Android Marshmallow iyo Lollipop
Waxaan ku tusineynaa sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo tirakoobka batteriga ee taleefankaaga Android hoostiisa noocyada Marshmallow iyo Lollipop
Samsung Galaxy A9 hadda waa rasmi: shaashadda 6 ″, octa-core chip iyo batari 4.000mAh ah
Maanta Samsung Galaxy A9 waa rasmi, kaas oo u imanaya inuu dhammaystiro taxanaha A, oo ay ku jiraan Galaxy A3, Galaxy A5 iyo Galaxy A7.
Viber Wink waa barnaamij cusub oo loogu talagalay xiriirka ka dhexeeya dadka si ay ula tartamaan Snapchat
Viber wuxuu soo bandhigayaa Viber Wink oo leh astaamo la mid ah Snapchat si uu ugu gudbiyo sawirro is-baabi'in ah ilbiriqsiyo gudahood sida uu rabo qofka soo diray
Runkeeper ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.0 iyadoo la cusbooneysiinayo interface iyo waxyaabo kale oo badan
Nooca 3.0 wuxuu u keenayaa dhowr waxyaalood oo cusub Runkeeper, oo ka bilaabmaya isbeddelka ku yimaada is-beddelka si loo beddelo astaamaha.
Chromer waa barnaamij fureysa iskuxirka URL-ka sidii inay ahaayeen tab Chrome gaar ah
Chromer wuxuu noo geynayaa sahamin sare adoo dib u cusbooneysiinaya tabeetooyinka gaarka ah ee Chrome markii uu gujinayo xiriiriyeyaasha gudaha ee barnaamijka
Wax kasta oo LauncherX na soo bandhigo, waa Launcher Android dareen leh fursado badan
LauncherX waa Launcher cusub oo loogu talagalay Android kaas oo qaybtiisa bilaashka ah wuxuu noo ogolaanayaa heer aad u sarreeya oo ah qaabeynta kombuyuutarradeena Android.
Waa maxay iyo sida loo suurtogeliyo Google Now on Tap ee ku jira Android 6.0 Marshmallow
Maanta waxaan sharxeynaa waxa ay tahay iyo sida loogu sahlo Google Now on Tap talaabo talaabo ah Android 6.0 Marshmallow
Sida loo hubiyo haddii tigidhkaaga bakhtiyaa nasiibka la siiyay
Barnaamijyadan taxanaha ah waxaad awoodi doontaa inaad ku hubiso haddii tobanka meelood ee bakhtiyaa-nasiibka Kirismasku uu guuleystay
Sida loogu rakibo barnaamijka kamaradaha Motorola mobilada kasta ee Android ah
Telefoon kasta oo Android ah wuxuu marin u heli karaa rakibidda barnaamijka kamaradaha Motorola laga bilaabo maanta mahadnaqa APK
Sony waxay abuurtaa batariyaal ku saleysan baaruud leh 40% horumarin ah ismaamul
Batariyada ku saleysan baaruudda ee ay abuurtay Sony waxay siinayaan 40% natiijo ka sareysa waxa ay tahay ismaamulkooda.
Skype iyo Facebook Messenger ayaa lagu cusbooneysiiyaa mawduucyada Kirismaska
Skype iyo Facebook Messenger waxay helayaan cusbooneysiin ku saabsan mowduucyada Kirismaska ​​iyo astaamo kale oo lagu xoojinayo taariikhahaas.
13 Waxyaabaha WhatsApp Lagu Sameeyo ee Ay Tahay Inaad Ka Ogaato
Maanta waxaan kuu sharaxeynaa 13 shaqooyinka WhatsApp ee ay tahay inaadan iska indhatirin, shaqooyinka qaar oo faa iido weyn u yeelan doona isticmaalka maalinlaha ah.
Microsoft Apps waa barnaamij Microsoft ah oo lagu soo dejisto dhammaan barnaamijyadooda ku jira Android
Barnaamijyada Microsoft waxay ku hor dhigayaan in ka badan 80 barnaamij oo ay Redmond ku qeybisay barnaamijka Android iyo dukaanka ciyaarta ciyaarta
OK Google kama shaqeynayo boosteejooyinka Motorola. Waxaan ku tusaynaa xalka
Haddii aad leedahay terminaal Motorola ah oo amarka codka ee Google uusan shaqeynin, naso iska hubi inaan ku tusi doono sida loo xaliyo qaab aad u fudud iyo tababar fiidiyow ah oo wax ku ool ah.
Barxad loogu talagalay farshaxanada xirfadleyda ah ee Behance ayaa lagu cusbooneysiiyay barnaamijkeeda Android illaa Qalabka Naqshadeynta
Behance waa barxad khadka tooska ah laga helo oo dhamaan noocyada fanaaniinta laga heli karo iminkana barnaamijkeeda waa la cusboonaysiiyay si waafaqsan.
Turjubaanka Microsoft wuxuu ku darayaa taageerada Android Wear nooca cusub ee 1.2
Android Wear waa mid ugub ah oo ka socda Microsoft Translator si uu ugu isticmaalo barnaamijkan qalabkaaga la gashan karo ama smartwatch.
myAppFree ayaa lagusoo rogay Android si maalin walba lacag la’aan kuugu keeno barnaamijyadooda lacag bixinta ah
Maalin kasta waxaa la xushaa barnaamij lacag bixin ah oo gebi ahaanba ka xor noqda myAppFree, oo ah adeeg leh 2 milyan oo isticmaale
MediaRiver, waa barnaamij bilaash ah oo lagu soo dejisto muusikada bilaashka ah, buugaagta bilaashka ah, waraaqaha waraaqaha ee bilaashka ah iyo barnaamijyo bilaash ah
Maanta waxaan kuu keenaynaa App dhan-terrain ah oo naga caawin doona inaan kala soo baxno muusikada bilaashka ah, buugaagta bilaashka ah iyo waraaqaha sawirada ee bilaashka ah.
Sida loo abuuro fiidiyowgaaga Kirismaska ​​ah si aad ugu hambalyeyso ciidahan si ka duwan
Maanta waxaan kugula talineynaa codsi bilaash ah oo kaa caawin doona inaad abuurto fiidiyowgaaga kirismaska ​​ah gebi ahaanba bilaash iyo ka Android.
Sida loo abuuro MEMES qosol badan oo ka socda Android
Maanta waxaan ku tusineynaa qaab aad u fudud oo aad ku abuuri karto MEMES qosol badan oo laga helo bartayada gunta ah ee Android-ka oo gebi ahaanba bilaash ah
Oukitel K10000, bahal wata 10.000 mAh baytarigiisa
Oukitel K10000, oo ah aalad u taagan wacdaraha ay ku fadhido oo ah 10.000 mAh baytar oo balanqaadaysa ismaamul 10 maalmood ah.
Sidee loogu hagaajiyaa Android dadka leh dhibaatooyinka aragga
Maanta waxaan kuu sharraxeynaa dhowr dariiqo oo aan ugu hagaajin karno Android dadka qaba dhibaatooyinka aragga.
Buugaagta Google Play waxaa lagu casriyeeyay qaabka "habeenka iftiinka" si loogu fududeeyo akhriska
Buugaagta Google Play waxaa lagu cusboonaysiiyay cusboonaysiin weyn si loo wanaajiyo waayo-aragnimada akhriska iyadoo la adeegsanayo habka "iftiinka habeenka"
PlankTone waa muusig muusig leh qaabab maqal ah oo caado u ah hees kasta
Qorshaha 'PlankTome' waxaad ku lahaan doontaa muusig muusig ah oo aad ku qaabeyn karto isle'egta hees, album ama farshaxan.
Xorriyadda ayaa xannibaya dhammaan waxyaabaha kaa mashquulinaya dhammaan aaladaha aad haysato
Xorriyadda ayaa kaa horjoogsanaysa inaad ku mashquusho degello internet oo xanniban oo dhan dhammaan qalabka aad haysato.
Shield Screen wuxuu xiraa shaashadda barnaamijyada la xushay
Haddii aad rabto inaad ka hortagto barnaamij xaasidnimo ah oo aad ka qaadatid shaashadda barnaamijyadaada, rakibi barnaamijka Screen Shield
Sida loo raaco doorashooyinka 2015 daqiiqad daqiiqad iyo waqtiga dhabta ah ee ka socda Android
Maanta waxaan kuu sharxeynaa sida loo raaco doorashada 2015 daqiiqad daqiiqad si aan waxba haba yaraatee kaaga baxsan.
Sida sixir loogu sameeyo kamaradda Android
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo sameeyo sixirka iyadoo loogu mahadcelinayo kaamirooyinka lagu dhex daray qalabkaaga kumbuyuutarka ee 'Android', wax yar oo male ah iyo soo degsashada App gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay Android.
Muuqaalo badan oo ka mid ah Galaxy A9 ayaa la sifeeyey kuwaas oo lagu ogaanayo 6 ″ shaashad iyo 4.000mAh baytar
Samsung Galaxy A9 wuxuu dhameystirayaa taxanaha A ee 2016 oo ah taleefan casri ah oo la imaan doona shaashad 6-inji ah, waxa aan badanaa ugu yeerno phablet
LG waxay cusbooneysiin doontaa LG G3 ilaa Android 6.0 Marshmallow
Soo saaraha Kuuriya ayaa ugu dambeyntii go'aansaday inuu cusbooneysiiyo qalabkiisa LG G6.0 Android 3 Marshmallow.
Sida loo abuuro farriin muuqaal ah oo shakhsiyan ah oo ka socota Santa Claus si carruurta yaryar ee guriga jooga ay u jeclaadaan Kirismaskan
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo abuuro fariin muuqaal ahaaneed oo Santa Claus ah, gebi ahaanba bilaash u ah kuwa yaryar ee guriga ku jira inay macno ahaan u shukaansadaan.
Launchify wuxuu dhigaa barnaamijyada ugu isticmaalka badan shaashadda qufulka iyo ogeysiiska ogeysiiska
Launchify wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto barnaamijyada aad ugu jeceshahay barta xaalada ama si aad ugula talisid kuwa aad u isticmaasho inta badan iyadoo loo eegayo goobta
Sida loo cusbooneysiiyo ZUK Z1 noocyada cusub ee Nightlys loona rakibo nooca cusub ee TWRP 2.8.7.0
Maanta waxaan sharxayaa habka saxda ah ee loo cusbooneysiiyo ZUK Z1 noocyada cusub ee Nightlys ee ka socda Cyanogenmod marka lagu daro rakibidda iyo cusbooneysiinta TWRP qaabkeedii ugu dambeeyay ee la heli karo.
Sida saxda ah ee loogu duubo fara-ku-xirnaashaha foomka dareenka shidma
Maanta waxaan sharaxaad ka bixineynaa sida saxda ah ee loo duubo sawirka faraha si dareenka sawirka faraha ee Androidkeenu u aqoonsado markii ugu horeysay.
Sidee si toos ah loogu daawan karaa FIFA Club World Cup 2015. Dhamaan kulamada Barça bilaash
Maanta waxaan kuu sharaxeynaa barnaamijyada aad ku daawan karto FIFA Club World Cup 2015.
Soo Degso Slim Twitter codsiga ugu fudud ee lagu xakameeyo xisaabaadkaaga Twitter
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo soo Dejiyo Slim Twitter oo aad u noqotid masuulka rasmiga ah ee macaamiisha ugu fudud Twitter-ka xilligan.
Albamyada iskaashiga ah ee hadda laga heli karo Sawirrada Google
Google waxay ku hirgelisay albumyo iskaashi ah Sawirada Google si ay ula wadaagaan xiriir URL ah oo aad ku dari karto sawirrada iyo fiidyowyada
[APK] Google+ 6.9 wuxuu soo bandhigayaa tab dhan ogeysiisyadaada
Waxyaabaha cusub ee Google+ ka hor intaan ciidaha Kirismaska ​​la gaarin ayaa ah isdhexgalka tab ogeysiis dhameystiran
Notif Log wuxuu ku siinayaa inaad marin u hesho dhammaan taariikhda ogeysiisyada ku soo dhaca mobilkaaga
Haddii aad rabto inaad xakamayso dhammaan ogeysiisyada imanaya terminaalka, iyo sidoo kale taariikh iyaga ka mid ah, ku rakib Notif Log.
Daaqad badan ayaa u iman doonta Android nooca soo socda
Mid ka mid ah qaababka sida aadka ah loogu seegay Android, daaqadaha badan, ayaa u iman doona nidaamka hawlgalka qaybta xigta.
Sida looga kiciyo waxqabadka OK Google shaashad kasta iyo Launcher kasta
Maanta waxaan sharxeynaa sida saxda ah ee loo qaabeeyo loona awood u yeesho waxqabadka OK Google shaashad kasta.
Calaamadaha Swiftkey waxay u yimaadaan sidii barnaamij gaar ah oo loogu talagalay dadka qaba autism-ka iyo dhibaatooyinka isgaarsiinta
SwiftKey waxay soosaaraysaa Calaamado si looga caawiyo dadka autistic-ga ah iyo kuwa leh dhibaatooyinka isgaarsiinta inay u isticmaalaan astaamaha jumlad ahaan.
Pushbullet wuxuu isku dayaa inuu ku soo ceshado dhul cusub sheeko cusub: ka soo dejiso fayl kasta kombiyuutarkaaga
Pushbullet wuxuu isku dayaa inuu soo kabsado dhul lumay tan iyo markii uu bilaabay koontada Pro oo leh muuqaal cusub oo u oggolaanaya helitaanka feylasha fog
Androidsis iyo Tu Lotero waxay ku siinayaan kaqeybgal dhan 1 euro isku aadka loogu talagalay Ghanada Kirismaska
Maanta, Androidsis oo kaashaneysa Tu Lotero waxaan ku siineynaa 1 euro qaab ah kaqeybgal loogu talagalay isku aadka jiilaalka Kirismaska ​​ee sanadkan 2015.
Sida loo kiciyo labbada taabo si loo xiro shaashadda Android isla markaana loo khiyaaneeyo in lagu furo adigoon taaban badhanka ku yaal Android-kaaga
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo labbada taabo si loo xiro shaashadda Android iyo xeelad lagu furo shaashadda adigoon taaban badhan kasta.
Warbixinta Hawada Plume waa barnaamijka lagu ogaanayo xaaladda wasakheynta hawada ee magaaladaada
Barnaamijka 'Report Plume Air Report' wuxuu noqdaa caawinta ugu fiican ee lagu ogaanayo heerka wasakhda magaaladaada haddii aad ku nooshahay dadweyne aad u tiro badan.
Cusbooneysiin cusub oo SwiftKey ah oo ku dareysa 'Pinying', garaacista hagaajinta, iyo interface emoji oo dib loo rogay
SwiftKey waxay hagaajineysaa qorista isticmaalaha si khaladaad badan aan loogu sameyn hab cusub oo ku jira barnaamijkan.
Instagram hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho saameynta "3D Touch" ee sawirada kujira Android
Instagram hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku isticmaasho "3D taabashada" Android inkasta oo aadan u baahnayn shaashad leh qalab ay ku habboon tahay
Wax cusub oo ka socda LINE waa Keep, 1GB keyd shaqsiyeed oo loogu talagalay moobilkaaga iyo kombiyuutarkaaga
Isticmaalayaasha Android iyo PC waxay awoodi doonaan inay marin u helaan LINE muuqaalkiisa cusub ee loo yaqaan 'Keep for file online'.
Sida loogu abuuro GIF animated ah Android-ka si dhaqso leh oo fudud
Iyada oo Gif Me ah! waxaad awoodi doontaa inaad abuurto GIF firfircoon, oo ah barnaamijka aan kugu tusno casharkaan yar.
Sida ugufiican looga faaiidaysto terminaalkeena Android lagana dhigo kuwo aad ufiican oo caqli badan
Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhammaan codsiyada muhiimka ah si aan uga faa iideysano terminaalkeena Android, ka dhigo kuwo aad u caqli badan una siiya howlo cusub
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee 2015 sida ku cad Google
Xulashada barnaamijyada ugufiican sanadka 2015 sida ku cad Google waxaan ka heli karnaa noocyo badan oo codsiyo ah kuwa ugu caansan ilaa aan la aqoon.
Yahoo Messenger ayaa gabi ahaanba la cusbooneysiiyay qaabeynta si ay u noqoto codsi ka wanaagsan
Yahoo Messenger waxay la timaadaa astaamo badan oo cusub iyo maxaa dib u naqshadeyn laga sameeyay xoq si loo bixiyo dareemo kale.
Drupe wuxuu ku xiraa dhamaan xiriiradaada iyo barnaamijyadaada hal meel si loo fududeeyo xiriirka
Drupe waa codsi geesinimo leh oo xiiso leh oo isku xira xiriirada iyo barnaamijyada isgaarsiinta isla goobta iyo goobta isdhexgalka.
Kordhi wax soo saarkaaga adoo ku abaabulaya waqtigaaga barnaamijka Clockwork Yaanyo
Yaanyada Clockwork waa barnaamij kaa caawinaya inaad ka faa'iideysato waqtiga aad haysato si aad u shaqeyso ama wax u barato.
Nexus wuxuu heli doonaa emotes cusub dhowaan
Google ayaa ku dhawaaqday in qalabka Nexus ay heli doonaan emojis cusub ama si fiican loogu yaqaan 'emoticons' si dhakhso leh maalmaha soo socda.
Soo gal labada wariye si aad uga xidho mobilkaaga nooca beta cusub ee Nova Launcher
Nova Launcher oo ah nooca beta waxay la socotaa labalaab saxaafadeed si loo xiro mobilada, tilmaam cusub oo loogu talagalay Google Now iyo khaanad app oo leh wareejin toosan.
Omate Rise waa smartwatch leh Android Lollipop oo leh 3G iyo Bluetooth
Omate Rise waa smartwatch gebi ahaanba madaxbannaan sababtoo ah isku xirnaanta 3G. Astaamaheeda kale ayaa ah inay leedahay Lollipop Android.
7 Usbuuc waa codsi kaa caawinaya inaad yeelato caado cusub ama aad hadafyo yeelato
7 Usbuucyadu waa codsi ku saleysan xaqiiqo cilmiyeed si looga caawiyo adeegsadaha inuu la qabsado caadooyin cusub iyo isbeddello noloshiisa ah.
Xaaladda GPS & Sanduuqa Qalabka waxaa lagu cusbooneysiiyay isbadal la cusbooneysiiyay, xulashooyin wadaag wanaagsan iyo waxyaabo kale oo badan
Muuqaaladan cusubi waxay aadayaan dhanka kartida ay ka heli karaan barnaamijka Pro-ka ah barnaamijka laftiisa iyo waxa uu noqon lahaa guddi-socodka dhinaca iyo wixii intaa ka badan.
Oppo wuxuu ku dhawaaqay Oppo A53 oo leh shaashadda 5,5,, Snapdragon 616 chip iyo 3.075mAh batari
Oppo ayaa hada ku dhawaaqday A53, oo ah taleefan casri ah oo adeegsada shaashadeeda 5,5 inji, 3.075 mAh baytarigeeda ah iyo qalabkeeda Qualcomm 616 octa-core.
Muxuu yahay isku xirnaanta USB OTG?: Waxaan kuu sharxaynaa wax kasta oo aad ku mahadsantahay mahadcelinta isku xirnaanta OTG ee Android-kaaga
Maanta waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyowga wax kasta oo aad sameyn karto adigoo u mahadcelinaya isku xirnaanta USB OTG ee kumbuyuutarkaaga Android.
Kuwani waa 10-ka codsi iyo adeeg ee daadinaaya batteriga Android-kayga inta ugu badan sida uu sheegayo AVG
Kuwani waa 10ka codsi iyo adeeg ee daadihiya batteriga koonteenarradeena Android inta badan.
Musiibada ES File Explorer
ES File Explorer waxay sameysay go'aano aad u xun oo horseeday musiibo guud iyadoo ku qasbeysa isticmaalaha inuu bixiyo wixii bilaash ahaa
Maamulaha ML wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto barnaamijyada aad jeceshahay qoyskaaga iyo asxaabtaada
Maareeyaha ML waa barnaamij fudud oo Naqshadeynta Maaddooyinka ah oo la yimaada hawsha maareynta dhammaan barnaamijyada si loogu keydiyo sidii APKs.
Hal Launcher waa barnaamij bilaw miisaanka culus u leh kuwa u xiiseynaya Apple
Hal Launcher wuxuu culeyskiisu yahay 2MB wuxuuna siiyaa barnaamij toos ah barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay kuwa nostalgic-ka u ah Apple adoo wata HD wallina sawirro leh.
Qoraalka Kaaliyaha wuxuu ku qaadanayaa la shaqeynta qoraalka taleefanka casriga illaa heer kale
Text Aide waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu farsameeyo qoraalka oo aan ka soo guurino casriga casriga ah ama kaniini Android ah.
Sida loo helo shaashadeena Android si ay u daarto markii la helo ogeysiisyada
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo helo shaashadeena Android si ay u daarto markii la helayo ogeysiisyada sida ay u dhaceyso, wax badan ama ka yar iyo keydinta kala duwanaanshaha, oo leh shaashadda shaashadda casriga ah ee boosteejada Motorola.
Pintasking wuxuu u rogaa barnaamij kasta oo Android ah badhanka sabaynta
Haddii aad rabto inaad wax badan ku qabato taleefankaaga casriga ah oo aad wax badan ka qabato Android heer kale, ha daahin inaad rakibto barnaamijkan weyn ee loo yaqaan Pintasking.
Safayr UI waa jileeye si buuxda ula midoobay Google+
Haddii aad raadineyso layeer wanaagsan oo aad taageere u tahay Google+, hubaal safiir UI waa lagama maarmaan laga bilaabo maanta.
U qaado wijetooyinka aad jeceshahay baarka ogeysiinta ee barnaamijkan la yiraahdo Snap
Snap wuxuu kuu soo jeedinayaa inaad wijiyadaha aad jeceshahay aad u qaadatid guddiga ogeysiiska si markaa, laga bilaabo qufulka shaashadda, aad uga heli karto iyaga
Sida loo duubo shaashadda Android adigoon xidid ahayn, xitaa dhawaaqa !!
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo duubo shaashadda Android adigoon xidid ku ahayn codsi xasaasi ah oo gebi ahaanba bilaash ah.
AppBlock wuxuu kaa caawinayaa inaad xannibto barnaamijyada qaarkood markaad u baahato inaad xoogga saarto shaqada ama nasashada
Haddii aad ubaahantahay dhowr saacadood oo barnaamijyada ama ogeysiisyada aysan ku dhibin, AppBlock wuxuu noqon karaa barnaamij muhiim u ah xakameynta mobilkaaga.
Maxaa ku cusub Telegram waa koox-kooxeedyo kor u dhaafaya 1000 xubnood
Telegram wuxuu culeyska ku soo celinayaa isagoo wata nooc cusub oo keenaya waxa ay yihiin "maamuliyaasha" iyo koox kooxeedyada kor u dhaafaya 1000 xubnood.
Waxaan wareysaneynaa Ignacio Vila, oo ah madaxa shirkadda Iomando
Waxaan wareysanay agaasimaha guud ee Iomando, Ignacio Vila, oo noo sheegay gudaha iyo dibada shirkada iyo waliba sirta guusha bilowgan Isbaanishka.
Habeennadii Koowaad ee CyanogenMod 13 waxay Marshmallow u keeneysaa Telefoonno kala duwan
7 waa aaladaha loo cusbooneysiiyay CyanogenMod 13 illaa habeenkii si toddobaadyada soo socda kuwa kale loo cusbooneysiin doono
Sony 'Fikradda Marshmallow' waxay u muuqataa mid ka sii fiican oo ka sii wanaagsan
Sony ayaa sii daayay taxane casriyeyn ah 'Concept for Marshmallow', oo tilmaamaysa imaanshaheeda sida ugu dhakhsaha badan nooca 6.0 ee Xperia
Sida loo furo ZUK Z1 Bootloader si aad u iftiimiso Rom Cyanogenmod Nightly oo hagaajiya dhibaatooyinka Wifi
Maanta waxaan kuugu sharxayaa adiga oo kaashanaya fiidiyoow, sida loo furo tallaabada ZUK Z1 Bootloader tallaabo tallaabo ah oo aad ugu lifaaqdo wax kasta oo aad u baahan tahay
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka Wi-Fi ee ZUK Z1
Halkan waxaan ku tusayaa sida loo xaliyo dhibaatooyinka ZUK Z1 Wifi ama halkii saxda laga ahaan lahaa, cadeynta ah in dhibaatooyinka ZUK Z1 Wifi ay yihiin kaliya Software.
Dhaqdhaqaaqyada ClearView, oo ah barnaamij lagu xakameeyo moobilkaaga gacanta oo leh astaamo
Dhaqdhaqaaqa ClearView waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad ku fuliso dhammaan noocyada ficilada adoo adeegsanaya tilmaamaha shaashadda taleefankaaga Android.
[APK] Soo dejiso oo rakib Kaameradda Google ee Jelly Bean
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo soo dejiyo loona rakibo Kamaradda Google ee loogu talagalay Android Jelly Bean. Apk wax laga badalay oo ansax ku ah Android 4.1, Android 4.2 iyo Android 4.3
Abuuritaanka muusikada oo lagu daray barashada Stagelight Music
Stagelight waa barnaamij loogu talagalay barashada muusigga oo leh casharro talaabo tallaabo ah isla mar ahaantaana u oggolaanaya isticmaaleyaasha horumarsan inay horumariyaan xirfadahooda
Cusbooneysiinta Skype ee Android oo leh awood lagu keydiyo farriimaha fiidiyowga iyo raadinta oo la hagaajiyay
Skype waxaa lagu casriyeeyay keydinta fariimaha fiidiyowga iyo astaamo kale oo badan oo cusub sida raadinta oo la hagaajiyay.
Haddii aad si khalad ah u tirtirtay Google Play Store ama aad leedahay terminaal aan lahayn rakibida abkan, maanta waxaan ku tusi doonaa sida gacanta loogu rakibo
Xitaa ha ku qaban radar-gaaga Kirismaska ​​soo socda ee leh Kaamirooyinka Xawaaraha Sare ee TomTom
TomTom Traffic Radars ayaa laga yaabaa inuu noqdo barnaamijka ugu fiican ee kugula weheliya wadada sidaasna kaaga digaya raadaarrada aad ka heli karto.
Segundamano.es wuxuu noqdaa Vibbo
Segundamano.es hadda waxay noqoneysaa Vibbo si loo cusbooneysiiyo loona wajaho adeegyo kale oo aad u riixaya sida Wallapop
Real Madrid - FC Barcelona waa bilaash adigoon waxba soo dejisan gabi ahaanba
Maanta waxaan sharxeynaa laba qaab oo loo arko Real Madrid - FC Barcelona oo ku nool si bilaash ah iyada oo aan waxba laga soo dejisan gabi ahaanba. Waxay sidoo kale ansax u tahay Android, windows, iOS iyo PC.
Nexus 6P iyo 5X app camera ayaa hada loo heli karaa dhamaan qalabka Marshmallow
Nooca cusub ee kamaradda Google wuxuu la imanayaa interface kamarad cusub oo lagu arkay Nexus 5X cusub iyo Nexus 6P kuwa leh Marshmallow.
[APK] Soo dejiso oo rakib Asus Zenfone 2 Launcher cusub nuuca ugu dambeeyay ee hurdiga ah
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo soo dejiyo oo loo rakibo barnaamijka "Asus Zenfone 2 Launcher", oo ah Launcher Android Launch oo leh xulashooyin badan oo qaabeyn ah oo caadi u ah boosteejooyinka Asus.
TV-gaaga u rogo kombiyuutar leh Chromebit
Chromebit waa aalad yar oo qiimo jaban oo Google dhawaan soo bandhigi doonto si TV-gaaga looga dhigo kombiyuutar dhameystiran
Isbeddelada Touchwiz ee Android 6.0 Marshmallow
Sawirada TouchWiz waxaa lagu daadiyay nooca loo yaqaan 'Android 6.0 Marshmallow' halkaasoo aad ka heleyso waxqabad wanaagsan iyo isbedel muuqaal ah.
5 barnaamij oo muhiim ah si aad uga barato Ingiriisiga mobilkaaga Android
5 barnaamij oo lagu barto Ingiriisiga oo aan kugula talineyno barnaamijka 'Androidsis' oo markaa aan awoodno inaan furno xirfad-yaqaanno cusub iyo mustaqbal fog
Launcher-ka ugu fiican ee Android ee ku habboon habka muuqaalka muuqaalka
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Launcher-ka ugu fiican ee Android ee ku habboon habka muuqaalka muuqaalka.
Sida loo xakameeyo isticmaalka xogta shabakadaha moobaylka
Maanta waxaan ku barayaa inaad xaddido isticmaalka xogta ee shabakadaha mobilada si aad ugu keydiso heerkayaga xogta oo markaa aad isku daydo inaad gaarto dhammaadka bisha oo aadan dhiman isku dayga.
Sida loo joogi karo geeska wararka ee taleefankaaga casriga ah
Dhamaan dhacdooyinka dhacay dhawaanahan, waxaa muhiim ah inaad haysato taleefankaaga casriga ah oo leh barnaamijyo gaar ah, adeegyo iyo shabakadaha bulshada si aadan uga maqnaan wax war ah.
[APK] Sida loogu sahlo wareegga degdegga ah ee AOSP Roms loogu talagalay LG G3.
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo kartiyeeyo waxqabadka wareegga degdegga ah ee Roms AOSP ee LG G3.
[APK] Waxaan ku tusaynaa sida ay u shaqeeyaan farriimaha WhatsApp-ka lagu soo bandhigo, iyo sida loo suurtogeliyo
Maanta waxaan ku tusineynaa sida farriimaha WhatsApp ay u shaqeeyaan, shaqeyn cusub oo aan awood u siin karno kaliya adigoo soo dejisanno beta beta-kii ugu dambeeyay.
Marshmallow Updates Roadmap ayaa u dusay aaladaha Samsung
Leaked Marshmallow ayaa cusbooneysiineysa khariiddada loogu talagalay qalabka Samsung bilaha soo socda.
Xposed hadda loo heli karaa Android Marshmallow 6.0
Kuwa haysta mobilada leh Android 6.0 Marshmallow waxay hadda rakibi karaan qaabka Xposed si ay u rakibaan modules casriyeysan.
Snapchat wuxuu bilaabay Lens Store si uu shaqsi ahaan ugu muujiyo sawiradaada $ 0,99
Snapchat wuxuu hada bilaabay Lens Store si dadka adeegsada barnaamijyadooda ay u haysan karaan muraayadahaas inta ay rabaan
HomeUX waa jileeye cusub oo qaabab kala duwan u abaabulaya desktop-kaaga moobiilka
HomeUX waa jileeye cusub oo keena xarrago xagga nashqadeynta ah oo bixisa dareemo kale oo khibrad u leh isticmaalaha.
Barnaamijka Doze wuxuu kuu keenayaa astaamaha badbaadinta batariga Marshmallow mobilkaaga oo wata Lollipop
Doze waa barnaamij ka taxaddaraya keenista hagaajinta batteriga Marshmallow ee mobilkaaga oo leh Lollipop.
Haa, dhibaatooyinka Wi-Fi ee ZUK Z1 waa jiraan !!. Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo leh caddeyn
Maanta, qaab mudaaharaad ah, waxaan ku tuseynaa dhammaan dhibaatooyinka Wi-Fi ee ZUK Z1, dhibaatooyinka aan, hadda, aan la xallin xitaa iyada oo la cusbooneysiiyay rasmiga rasmiga ah ee ugu dambeysay ee la sii daayay Noofambar 11.
Sida loo cusbooneysiiyo ZUK Z1 si rasmi ah Cyanogen OS 12.1-YOG4PAS3OH, gacanta iyo adigoon lumin xog ama damaanad rasmi ah. Ma xalin doontaa dhibaatooyinka culus ee Wifi?
Maanta waxaan sharxayaa sida loogu cusbooneysiiyo ZUK Z1 gacanta, iyadoo la ilaalinayo dammaanadda rasmiga ah ee terminaalka iyo sidoo kale dhammaan codsiyada iyo xogta gaarka ah.
4 khiyaanooyin si looga fogaado khayaanada WhatsApp
Khiyaanooyinka WhatsApp ee isku dayaya inay xadaan xogta ama noo qoraan diiwaangelinno ayaa marba marka ka dambeysa sii badanaya. Maanta waxaan ku baraynaa inaad ka fogaato.
Swiftkey wuxuu ku dhuftey nooca 6.0 oo leh saadaal erayga ah, mowduucyo cusub, iyo inbadan
Swiftkey 6.0 waa nuuca cusub ee mid ka mid ah teebabka ugu caansan ee soo bandhiga mowduucyo cusub, saadaal laba erey ah, iyo waxyaabo kale oo badan.
Natiijooyinka Runtastic waxay abuurtaa qorshooyin 12-usbuuc ah oo lagu hagaajinayo jimicsigaaga
Natiijooyinka Runstastic waa barnaamij cusub oo ka socda shirkaddan oo kaa dooneysa inaad raacdo qorshooyinka tababarka ee 12-toddobaad ah.
Wax kasta oo uu bilawga cusub ee 'Blackberry Launcher' na siiyo. Mid ka mid ah Launchers-yada ugu dhaqsaha badan xilligan
Maanta waxaan ku tusineynaa wax walba oo uu na siinayo Launcher-ka cusub ee Blackberry iyo sidoo kale habka fudud ee lagu rakibo Launcher, kiiboodhka, kalandarka iyo adeegyada Blackberry.
Ku diyaari Gundhiggaaga 3 toddobaad gudahood
Ma rabtaa inaad ku horumariso barnaamij sida Tinder ah muddo 3 toddobaad gudahood ah? Hadda waa suurtagal mahadsanid koorsada barnaamijkan barnaamij ee loogu talagalay Android. Oo leh qiimo dhimis!
[APK] Soo dejiso boodhadhka BlackBerry Priv, kalandarka iyo barnaamijka bilawga
BlackBerry Priv waa taleefan ku yimaada qiimo aad u sarreeya waxaanan hadda haysannaa barnaamijyadooda sida kalandarka, furaha iyo kumbuyuutarka.
Sida loo dayactiro loona cabbiro batterigaaga Android, oo ku habboon isticmaalayaasha Root iyo Root
Maanta waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah adoo kaashanaya cashar fiidiyow ah, laba dariiqo oo lagu dayactiro laguna cabiro batteriga ku shaqeeya Android, ansax ah Root and No Root users.
Sida loo tarjumo Netease ilaa Isbaanishka mahadnaqa moduleka Qaabdhismeedka Xposed
Maanta waxaan baraynaa dhammaan isticmaaleyaasha Root sida loogu turjumo Netease ilaa Isbaanish si loogu sii wado raaxeysiga wax kasta oo Shiinaha Spotify na siiso.
Sida loo dayactiro Khaladaadka guud ee Nexus 5X
Waxaan soo bandhigeynaa liiska dhibaatooyinka Nexus 5X iyo xalalkooda suurtagalka ah si mobiladan weyn ee Android loo isticmaali karo dhammaan cabirkeeda.
Amaze File Manager, fayl baare doonaya inuu wax saxo
Maamulaha faylka cusub ee xiisaha leh ee loo yaqaan 'Android' oo loo yaqaan 'Amaze File Manager', oo gebi ahaanba bilaash ah iyada oo aan la xayeysiin.
5 sahamiyayaal fayl xiiso leh mobilkaaga Android
Dhowr sahamiyayaal fayl ah oo aadan ku seegi karin Android, kuwaas oo aan ka helnay wax cusub oo aan ahayn mid kale.
Ku samee baaritaan deg deg ah taleefankaaga barnaamijka Raadinta Degdegga ah
Raadin Degdeg ah waa barnaamij si dhakhso leh wax uga baari doona taleefankaaga adoo faylasha si joogto ah u kala sooca
Xiaomi waxay furaysaa bangi batari 20.000 mAh ah oo leh Quick Charge 2.0 $ 24
Bangi awood leh oo ka kooban 20.000 oo ka socda Xiaomi illaa 24 doolar si loo beddelo si loo siiyo dhammaan batteriga lagama maarmaanka u ah taleefankaaga casriga ah.
Tijaabi horeyba Android 6.0 ee caalamiga LG G3, D855 mahadnaqa kooxda Xenon HD.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso Android 6.0 LG G3 maanta waxaad ku jirtaa nasiib maxaa yeelay waxaan ku tusineynaa sida loo iftiimiyo Roma Marsmallow talaabo talaabo ah.
Lumsing 10.400 mAh bankiga batariiga ee € 19,99 at Amazon
Bangi batari 10.400mAh ah oo ka yimaada Lumsing qiimo dhan € 19,99 wuxuu noqon karaa qalab ku habboon in lagu tago maalinta batteriga.
Cusbooneysiinta ku saabsan Android 6.0 Marshmallow ayaa u dhow una dhow Moto G 2015
Motorola waxay ku tijaabineysaa Moto G 2015, noocii ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka Google ee aaladaha mobilada, Android 6.0 Marshmallow.
Pixlr waxay heshaa cusbooneysiinkeedii ugu weynaa tan iyo markii la bilaabay
Pixlr waa mid kamid ah barnaamijyada ugufiican dhanka tafatirka sawirka iminkana waa loo cusboonaysiiyay munaasabada si ay uhesho interface cusub.
Kalsoonow, barnaamij sida Snapchat ah oo isku dayaya inuu adkeeyo qaadista shaashadda farriimaha
Si 'Snapchat' uu u yimaado Confide, oo ah barnaamij loogu talagalay Android isla markaana u oggolaanaya amniga wadaagista sawirrada si aan qofna uga qaadin shaashadda iyaga ka mid ah.
CHAT dhaca ayaa u rogaya taleefankaaga casriga aalad fariin kadib
CHAT Fallout waa khamaar xiiso leh oo lagu diro sawirada iyo GIF-yada firfircoon iyada oo loo marayo barnaamijyada kale ee sheekaysiga halka mid la sugayo dhacdada weyn ee 4
Nomad wuxuu ku dhawaaqay shandad maqaar oo leh xeedho batari 2400mAh
Nomad waxay soo saartay boorso kuu ogolaan doonta inaad taleefankaaga ka qaadatid batterigiisa 2.400 mAh oo qiimahiisu dhan yahay $ 80.
Signal, barnaamijka farriinta ee uu kafaalo qaaday Snowden laftiisa, ayaa hadda laga heli karaa Android
Edward Snowden waa kan siiyay ogolaanshaha barnaamijkan loo yaqaan 'Signal' kaas oo la yimaada ujeedooyinka cad ee daryeelka iyo sirta.
Texpand wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u abuurto tuuryo weedho aad badanaa u isticmaasho
Haddii aad rabto inaad waqti kaydsato oo aad abuurto dariiq si aad u bilowdo weedh dhammaystiran, Texpand wuxuu noqon karaa barnaamijka aad ka raadineysay taleefankaaga Android.
Suunka 'Ion Belt', batterigaaga ku qaad dhexdaada suunkan gaarka ah
Ion Belt waa mashruuc cusub oo ku saabsan Kickstarter oo ujeedadiisu tahay inaad taleefankaaga ka qaadatid suunka surwaalkaaga.
ChromeOS waa la joogayaa
Google waxay u soo baxday inay cadeyso shakiga laga qabo mustaqbalka ChromeOS waana cadahay, waa la joogayaa.
[ROOT] Laba barnaamij oo loogu talagalay in lagu habeeyo muuqaalka 'Doze' ee durbaannada Marshmallow
Laba barnaamij oo si buuxda uga faa'iideysta Doze, waxqabadka cusub ee Android 6.0 Marshmallow si loo hagaajiyo nolosha batteriga ee terminalka.
Soundcamp waa barnaamijka Samsung ee kuu ogolaanaya inaad muusig ku sameysato taleefankaaga casriga ah
Haddii abuurista muusikada ay tahay sheygaaga, haka daahin inaad soo degsato barnaamijkan loo yaqaan 'Soundcamp' oo u gaar ah casrigaaga Samsung.
Xperia Z5 waxay rajeyneysaa batari weyn oo koror ah iyadoo loo yaqaan 'Stamina Mode' oo ku jirta Android 6.0 Marshmallow
Iyadoo lala kaashanayo Sony's Doze iyo Stamina Mode, Xperia z5 ayaa soo bandhigi doonta Android 6.0 Marshmallow oo leh nolol batari weyn.
3 barnaamij oo ay tahay inaad fiiro gaar ah siiso
3 barnaamij oo waxtar u yeelan kara haddii aad leedahay Qualcomm CPU, Pebble wearable ama aad rabto inaad si buuxda uga faa'iideysato dhacdooyinka la qorsheeyay
Dhibaatooyinka Netease ayaa joojiyay shaqadii
Maanta waxaan kuu sheegeynaa sababta dhibaatooyinka Netease iyo sababta ay u joojisay shaqadeeda iyo waliba xalka ku meel gaarka ah ee isticmaalayaasha Root No iyo xalka dadka isticmaala Root.
Backdrops, oo ah barnaamij aad ufiican oo aad maalin walba ku badasho gidaarkaaga
Haddii aad raadineyso barnaamij shakhsiyan ka dhigaya darbiga taleefankaaga casriga ah, ha ka daahin rakibidda Backdrops, kaaama niyad jabi doono.
Beats Pill +, barnaamijka labaad ee Android ee Apple waa kan
Apple wuxuu la baxayaa barnaamij labaad oo Android ah oo laga bilaabay Play Store oo la yiraahdo Beats Pill +. Waxay u muuqataa inay awood u leedahay inay ku xirto laba taleefan oo taleefanka sameecada ah.
Ku maaree xiriiriyahaaga qaab kafiican oo leh FullContact, oo hadda laga heli karo Android
FullContact wuxuu isku dayayaa inuu ka dhigo howsha maareynta xiriirada mid fudud oo raaxo leh iyadoon waqti looga lumin.
U soo dejiso astaamaha Halloween ugu wanaagsan Android-kaaga
Munaasabadda xafladaha jaahiliga ah ee Halloween waxaan kuu soo bandhigeynaa astaamaha Halloween ugu wanaagsan ee qalabkaaga Android.
Bilawga Arrow Launcher App-ka ee Microsoft ayaa Ka Baxaya Beta
Microsoft ayaa hada uun soosaartay qeybtii ugu dambeesay ee barnaamijkeeda Fallaarta Launcher-ka ee loo yaqaan "Larow Launcher app launcher" ee Play Store kadib markii ay dhowr bilood ku qaadatay beta.
[Soo Degso APK] Noocyada Sawirada Google ee 1.8 waxay kuu oggolaaneysaa inaad qariso dadka la aqoonsaday
Sawirrada Google waxay la yimaadaan nooc cusub, 1.8, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku qariso dadka la aqoonsan yahay ee faylalka kala duwan ee isticmaalahu haysto.
4 Beddelka Nexus 5x ee tayada iyo qiimaha ka fiican
Anagoo og qiimaha iibka rasmiga ah ee Isbaanishka Nexus 5x, maanta waxaan soo bandhigeynaa 4 bedel oo Nexus 5x ah oo tayo sare leh iyo qiimo hoose.
Kaydinta batteriga ku jira Android-kaaga waa suurtagal haddii aad xidid tahay, waxaan kuu sharraxeynaa sida ugu fudud ee loo helo
Maanta waxaan u sharaxeynaa dadka isticmaala Root, sida loo badbaadiyo batteriga ku shaqeeya Android-kaaga adoo hoos u dhigaya inta jeer ee ugu badan ee processor-ka ee terminal-kaaga Android adigoon lumin waxqabadkeeda.
MIUI 7 hadda waa la heli karaa laga bilaabo maanta
Xiaomi waxay maanta si rasmi ah u daahfureysaa nooca cusub ee nidaamkeeda hawlgalka, MIUI 7.
Sida loogu diro WhatsApp codkaaga mahadsanid Google Now. Sidoo kale waxay ansax u tahay Telegram iyo Hangouts
Google Now horeyba waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku soo dirto WhatsApp codkaaga, shaqeyn muddo dheer la sugayay oo la doonayo oo lagu kordhiyay barnaamijyada kale sida Telegram ama Hangouts.